Samee Adobe Flash ah Kan sameeyey Flash Kediska - Isticmaalka Kediska arrimo
Haddii aad raadinayso qaabab ay u abuuraan a kedis online fudud dhamaystiran la kala dooran karo war celin, goolasha iyo raadraaca, isticmaali arrimo Flash kedis lacag la'aan ah Adobe Flash fiican Goof ah. Laakiin haddii aadan khabiir ku ah Flash, Wondershare QuizCreator noqon kartaa barnaamijka kala duwan oo loogu talagalay. Maqaalkani waxa uu ku bari doonaa sida si ay u abuuraan kedis flash isticmaalaya labadan qalabka.
Qeybta 1: Samee Kediska Flash a Isticmaalka Adobe Flash
Qeybta 2: Ka dhig Kediska Flash a Isticmaalka QuizCreator
Flash MX iyo qaybaha dambe bixiyaan arrimo kedis taas oo ka caawisa inay socdaan natiijooyinka si toos ah iyo diri kedis ah in nidaamka maamulka waxbarashada (LMS) la SCORM iyo waafaqsanaanta AICC. Sidaas oo keliya isticmaalaan wanaagsan oo ka mid ah arrimo kedis dhisay-in, ka dibna waxaad samayn kartaa su Flash kalifaya iyo is-dhexgal.
Talaabada 1: Download Adobe Flash iyo Abuur ah Document New Flash
First of dhan, haddii aadan haysan Adobe Flash lagu rakibay on your computer, ka eeg website-ka rasmiga ah ee Adobe ( http://www.adobe.com/downloads/ ) iyo soo bixi maxkamad version 30 maalin ah. Markaas ka dib markii socda software this, la abuuro dukumenti cusub Flash doorashada ee hadda jira Kediska Template . File > New > arrimo tab > Kediska Category > Modern Photo Quiz_style2 Template
Markaas kedis ah oo si buuxda u shaqayso arrimo kedis ah Jiid iyo dejinta, buuxi ee bannaan, Waxyaabaha Hot, Hot Spot, kala doorashada badan, iyo Run ama Been, arbushin doonaa.
Talaabada 2: Edit ku Su'aalo iyo Jawaabo oo tijaabi Moive ah
Edit su'aalaha iyo jawaabaha aad mashruucan. Markaas tijaabin moive ah adigoo gujinaya Control > Imtixaanka Movie.
Talaabada 3: badbaadi document Flash ah
Markaas badbaadin document Flash ah, waxaa la bixin magaca by doorashada File > Save.
Talo: Ku dar su'aalo More ee Flash Project
Waxaad ku dari kartaa nooc kasta oo su'aal sida kedis hal (tusaale, ama been ama run) aad ku cusub Flash document waqti kasta.
1. Haddii aad rabto in aad is geliso su'aal hal sida barashada dhexgalka, kaliya aad u samayn kartaa sidan oo kale: Window > Common Maktabadaha > Falgalka Barashada
2. maktabadda A ee isdhexgalka waxbarasho kala duwan furi doonaa. Jiid mid aad rabto in aad u gudbo marxaladda.
More: Samee Kediska ah ee Adobe Flash Simple Talaabo Talaabo >>
Waa wax ku ool ah si ay u abuuraan aalaha Flash la Adobe Flash, laakiin qof kasta oo aan u isticmaali kartaa Flash Barnaamijka dhammaataan si ay u abuuraan aalaha. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaar ka mid ah qalabka qoraalka kedis deg deg ah sida Wondershare QuizCreator si ay adiga su Flash hab u fududahay.
Samaynaysaa kedis Flash waxa uu ku siinayaa ilaa 18 nooc oo su'aal ah abuurista aalaha iyo sahan labadaba. Noocyada Su'aal, dhab ahaantii, ku dhowaad waa wax la mid ah sida kedis arrimo Flash kor ku xusan ee Adobe Flash. Farqiga u dhexeeya nooc su'aal oo kedis Flash ah arrimo bixiyo Adobe Flash, waa in la su'aalahan ma aha in aad in aad ogaato wax ku saabsan Flash ActionScript laakiin waxaad samayn kartaa su korodhsadaan daqiiqo. Tani gaare Flash kedis siisaa hab tafatirka qaab ku saleysan si aad u samayn Abuuridda iyo goobaha ee nooc kasta oo su'aalo ah oo kale ama been ama run, kala doorashada badan (Single Jawaab), Response Multiple, buuxi ee bannaan, casharka Riix Map, iwm Fur nooca su'aasha iyo daaqad la foom horena arbushin ilaa doona. Ku buuxi meelaha banaan ee ka beer kale ku dara oo aad ku eegaan karo imtixaanka goobtii si ay u hubiso saamaynta.
Fiiri sida ugu fudud ee aad ka abuuri karaan Kediska Flash a >>
Wixii aqoon badan oo ku saabsan isticmaalaya QuizCreator abuurista Flash su, fadlan eeg: http://www.wondershare.com/pro/quizcreator.html
> Resource > Talooyin > laba siyaabood oo loo sameeyo Kediska Flash ah